125+ မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်အားပေးမှုအဆင့်များ | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ဒံယလေက | | စာပိုဒ်တိုများနှင့်ပုံများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြေအနေဆိုးတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့အားအရာရာကိုဘေးဖယ်ထားရန်သို့မဟုတ်အရှုံးပေးစေသည့်အချိန်များရှိသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်လှန်ရန်အားပေးမှုရင်းမြစ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည် အားပေးမှုအဆင့်များ အဲဒါကသင်ထပြီးမတ်တပ်ရပ်နိုင်အောင်ကူညီလိမ့်မယ်။ မုန်တိုင်းတိုင်းအပြီးကတည်းကအေးဆေးတည်ငြိမ်လာတယ်။
အောက်ပါစုဆောင်းမှုသည်အမည်မသိနှင့်ကျော်ကြားသောရှေးခေတ်နှင့်လက်ရှိထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်များမှစာရေးဆရာများ၏အားပေးစကားနှင့်ပြည့်စုံသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့တွင်လုံးဝအခမဲ့သုံးနိုင်သောစကားစုများပါသည့်ပုံများပါ ၀ င်သည်။ အဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့လူမှုရေးကွန်ယက်တွေမှာစုစုပေါင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့မျှဝေနိုင်တယ်။ ထပ်ထည့်စရာမလိုပါကအောက်ပါစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြသည် -
စဉ်းစား၊ ယုံကြည်ပါ၊ အိပ်မက်မက်ပါ။ - ဝေါ့ဒစ္စနေး
လူတစ် ဦး ကျူးလွန်နိုင်သည့်အကြီးမားဆုံးအမှားမှာအမှားတစ်ခုလုပ် မိ၍ ကြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ - အဲလ်ဘတ် Hubbard
အခြားအစီအစဉ်တွေရေးဆွဲနေတုန်းဘဝဟာမင်းရဲ့ဘေးမှာဖြစ်ပျက်နေတာပါ။ - John Lennon
သင်၏အသက်တာသည်ရေတွက်။ မရ၊ - လင်ကွန်းအေဗရာဟမ်
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝအစီအစဉ်ကိုမရေးဆွဲခဲ့ပါကအခြားသူများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ပြီးတော့မင်းကိုဘာတွေစောင့်ကြည့်နေလဲ။ ဖြစ်ကောင်းအနည်းငယ်သာ။ - Jim Rohn
အခက်အခဲများသည်အလွန်ခါးသီးသော်လည်းမမြုံနိုင်ပါ။ - ဂျိုးဇက် Ernest Renan
ဘဝသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖြစ်ပျက်သောအရာ ၁၀% နှင့် ၉၀% သည်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တုံ့ပြန်သည်။ - ချားလ်စ် Swindoll
သင်မလုပ်နိုင်ဟုသင်ထင်သောအရာများကိုသင်လုပ်ရမည်။ - Eleanor Roosevelt ရုစဗဲ့
အံ့ဖွယ်အမှုများသည်အခက်အခဲများမှဖြစ်ပေါ်လာသည်။ - Jean de la Bruyere
ငါစီရင်ချက်ကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းတစ်ခုခုမှာပျက်ကွက် ငါလက်မခံနိုင်တာကကြိုးစားတာမဟုတ်ဘူး။ - မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်
အရှည်ဆုံးလမ်းလျှောက်မှုသည်တစ်လှမ်းတည်းဖြင့်အမြဲတမ်းအစပြုသည်ကိုမေ့ပစ်ရန်မေးခွန်းမဟုတ်ပါ။ - ဟိန္ဒူစကားပုံ
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအရာရာတိုင်းဟာပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အပြစ်အနာအဆာများကိုကျော်။ ကြည့်ရှုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ - အမည်မသိ
ဘဝဟာဖြေရှင်းရမယ့်ပြnotနာမဟုတ်ပါ၊ - Soren Kierkegaard
သင်ဖြစ်နိုင်သောသူဖြစ်ရန်ဘယ်တော့မှနောက်ကျမည်မဟုတ်ပါ။ - George Eliot
ပန်းတိုင်တွေများလေလေပျော်ရွှင်လေလေပဲ။ သင်မယုံနိုင်လောက်အောင်များသောအရာများဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုသင်မျှော်လင့်ရမည်၊ ဘာမျှမကအရမ်းကောင်းသည်ကိုနားလည်ပါ ဘယ်အတားအဆီးကမှမင်းကိုနှေးကွေးအောင်မလုပ်ပါနဲ့ - Eileen Caddy
စွမ်းအားသို့မဟုတ်ထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်ဘဲအဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလားအလာကိုဖော်ထုတ်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ - Winston Churchill
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလှပဆုံးအရာမှာကမ္ဘာကြီးကိုယ်နှိုက်ဖြစ်သည်။ - Wallace Stevens
မင်းကိုပြစ်တင်ဝေဖန်တာ၊ အသရေဖျက်တာ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်တည်မှုအတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ - Osho
အရှုံးပေးသူကိုအောင်အောင်မြင်မြင်အောင်နိုင်သူသည်သူရဲကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ - သောမတ်စ် Carlyle
လူတစ်ယောက်ဟာသူထင်တာကိုများသောအားဖြင့်ဖြစ်လာတယ်။ ငါတစ်ခုခုလုပ်လို့မရဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်ပြီးပြောရင်ငါမလုပ်နိုင်တော့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါကအစ၌ကျွန်ုပ်၌မရှိခဲ့သည့်တိုင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်မှာသေချာသည်။ ဂန္ဒီ
သင်ယနေ့ပြုလုပ်သောအရာသည်သင်၏မနက်ဖြန်အားလုံးအတွက်တိုးတက်စေနိုင်သည်။ - Ralph Marston
အပင်တစ်ပင်စိုက်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်သည်လွန်ခဲ့သောအနှစ်နှစ်ဆယ်ကဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့် - တရုတ်စကားပုံ
ဘ ၀ ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအသက်ရှူနှုန်းဖြင့်တိုင်းတာသည်မဟုတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှု။ ထွက်ပြေးသောအချိန်များအနက်။ - မာယာအန်ဂျလို
ရဲစွမ်းသတ္တိဆိုတာကြောက်ရွံ့မှုကင်းမဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါကိုအောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်။ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိသူများသည်မကြောက်သူများမဟုတ်ဘဲအောင်နိုင်သူများဖြစ်သည်။ - နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား
ရူးသွပ်ခြင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုရရှိရန်မျှော်လင့်လျက်ထပ်တူထပ်ခါထပ်ခါလုပ်နေသည်။ - အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း
ဘဝမှာပြန်မရနိုင်တဲ့အရာသုံးခုရှိတယ် - WORD၊ ပျောက်ဆုံးသွားတခါ MOMENT အချိန်, တခါကုန်ပြီ - အမည်မသိ
ယခုနှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်းသင်မလုပ်ခဲ့သောအရာများအတွက်နောင်တရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်နေရာမှကြိုးများနှင့်ရွက်လွှင့်သွားခြင်း၊ သင့်ရွက်လွှင့်သည့်လေကိုရှာဖွေပါ။ စူးစမ်းပါ၊ အိပ်မက်ပါ၊ ရှာဖွေပါ။ - Mark Twain
အောင်မြင်မှု၏ ၈၀% သည်ခန့်အပ်မှုအတွက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ - Woody Allen
သငျသညျအစဉ်အဆက်လိုချင်သမျှကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အခြားဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ - George Addair
လူတွေကမင်းကိုနုတ်ထွက်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ဆက်သွားပါ သင့်တွင်ရှိသောသံသံသံချေးမသွားပါစေနှင့်။ - ကတ္တား၏ထရေဇာ
သင်ကအိပ်မက်မက်နိုင်လျှင်သင်လုပ်နိုင်သည်။ - ဝေါ့ဒစ္စနေး
ကျရှုံးရန်မကြောက်ပါနှင့်။ ဒါဟာကျရှုံးဖို့မဟုတ်ဘဲအမှားကိုအလွန်နိမ့်စွာညွှန်ပြရန်။ ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူ, ကပျက်ကွက်ပင်ဘုန်းကြီးသောဖြစ်ပါတယ်။ - ဘရုစ်လီ
ခွန်အားသည်ကိုယ်ခန္ဓာစွမ်းရည်မှမဟုတ်ဘဲ ၀ ိညာဉ်တော်၏အလိုတော်မှဖြစ်သည်။ - ဂန္ဒီ
သင်တတ်နိုင်သမျှ၊ လုပ်သမျှ၊ လုပ်သမျှကိုလုပ်ပါ။ - Teddy Roosevelt ရုစဗဲ့
သင်ခုနစ်ကြိမ်လဲမည်ဆိုလျှင်အရေးမကြီးပါ၊ သို့သော်ရှစ်ထပါ။ - ဂျပန်စကားပုံ
သင်၏အသက်တာ၏ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးနေ့ရက်များမှာသင်ပြုံးမပြသောနေ့ရက်များဖြစ်သည်။ - Cummings က
မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသည်အောင်မြင်မှု၏ပထမဆုံးလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်။ - Ralph Waldo အီမာဆန်။
ဘ ၀ ဟာတိုတောင်းတယ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ရှားပါးသည်၊ သင်ကိုယ်တိုင်သွားပါစေ။ ဒေါသသည်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်းကိုဖယ်ရှားပါ။ အမှတ်တရများကချိုမြိန်, သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်။ - အမည်မသိ
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုအရင်ဆုံးသိပြီးသင်ကိုယ်တိုင်ထက်သာလွန်သောစွမ်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်လိုလျှင်သင်လုပ်ချင်ရာကိုလုပ်နိုင်သည်။ - အဲလာဝီဝီလ်ကော့စ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းမှသင်ယူပါကအောင်မြင်မှုသည်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ - Malcolm Forbes မဂ္ဂဇင်း။
အောင်မြင်မှုသည်စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းမရှိဘဲပျက်ကွက်ခြင်းမှရှုံးနိမ့်ခြင်းသို့သွားရန်သင်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ - Winston Churchill
အောင်မြင်မှုဆိုတာဘာလဲ အမျိုးသားတစ် ဦး သည်နံနက်အချိန်တွင်ထ။ ညအချိန်တွင်အိပ်ရာဝင်ချိန်နှင့်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်သူနှစ်သက်ရာကိုပြုလုပ်သည့်အခါအောင်မြင်သည်။ - Bob Dylan
ပေါ့ပါးသောဝန်ကိုမတောင်းပါ၊ ခိုင်မာသောကျောကိုတောင်းပါ။ - Theodore Roosevelt ရုစဗဲ့
သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲမည်သူကိုမျှသင့်ကိုအဆင့်နိမ့်သည်ဟုမခံစားရကြောင်းသတိရပါ။ - Eleanor Roosevelt ရုစဗဲ့
- လူ၏စိတ်သည်ပconိသန္ဓေ ယူ၍ ယုံကြည်နိုင်သောအရာမှန်သမျှသည်အောင်မြင်နိုင်သည်။ - နပိုလီယံဟေးလ်
နာကျင်မှုကယာယီဖြစ်တယ်။ တစ်မိနစ်၊ တစ်နာရီ၊ တစ်ရက်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်လောက်ကြာနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီကိစ္စအဆုံးသတ်တော့မယ်။ ငါစွန့်လွှတ်လိုက်ရင်တော့ထာဝရနာကျင်လိမ့်မယ်။ - လန်းအမ်းစထရောင်း
ဘဝကိုမစဉ်းစားတော့ဘဲအသက်ရှင်နေထိုင်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါ။ - Paulo Coelho
အောင်မြင်မှုသည်အခြားသူများထွက်ခွာသွားပြီးနောက်များသောအားဖြင့်ဇွဲရှိခြင်းကိစ္စဖြစ်သည်။ - ဝီလျံ Feather
ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုဘေးဖယ်ထားပြီးအသစ်ကိုလက်ခံရန်သတ္တိများစွာလိုအပ်သည်။ သို့သော်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောအရာများတွင်လုံခြုံရေးလုံးဝမရှိပါ။ စွန့်စားမှုနှင့်ဘဝ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုများတွင်ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိသည်။ လှုပ်ရှားမှု၌ဘဝရှိပြီးပြောင်းလဲမှု၌သင်တို့၏စွမ်းအားရှိသည်။ - အလန် Cohen ကို
နေ့တိုင်းဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားမပျော်ရွှင်သောအရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်နိုင်သည့်အချိန်ကိုပေးသည်။ မှော်အခိုက်အတန့်သည်ဟုတ်ကဲ့ (သို့) no သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ - Paulo Coelho
ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများကိုခံဝံ့ဝံ့သူသာလျှင်အလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။ - Will Smith
စွန့် ဦး တီထွင်စွန့် ဦး တီထွင်သူသည်အပြောင်းအလဲများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေသည်၊ တုံ့ပြန်သည်။ - ပတေရုသ Drucker
ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ပြန်မလှည့်ဘဲအသစ်အစပြုနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ယခုမှ စ၍ အဆုံးသတ်အသစ်ကိုရရှိနိုင်သည်။ - သူ Carl Bard
တံခါးတစ်ပေါက်ပိတ်လျှင်သင်မမြင်နိုင်လျှင်ပင်နောက်တစ်ခုဖွင့်သည်။ - Bob Marley
ပျော်ရွှင်မှုတံခါးတစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ကိုပိတ်လိုက်သောအခါအခြားတစ်ခုကဖွင့်လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်မကြာခဏတံခါးပိတ်ကြည့်ပြီးတံခါးကိုမမြင်ရဘူး - ဟယ်လင် Keller
နေ့တိုင်းသင်ရိတ်သိမ်းသည့်ရိတ်သိမ်းမှုအကြောင်းကိုမဆုံးဖြတ်ပါ။ - ရောဘတ်လူးဝစ်စတီဗင်ဆန်
မင်းဘ ၀ မှာအကြီးမားဆုံးအမှားကတော့ဘယ်တော့မှမကြိုးစားဖူးတဲ့အမှားတစ်ခုလုပ်မိခြင်းပဲ။ -အမည်မသိ
သင်၏အချိန်သည်အကန့်အသတ် ရှိ၍၊ သူတစ်ပါး၏အသက်တာကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်။ အခြားသူများ၏အတွေးများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်တရားသေအယူဝါဒကိုမလိုက်နာပါနှင့်။ အခြားသူများ၏ထင်မြင်ချက်များ၏ဆူညံသံသည်သင်၏အတွင်းပိုင်းအသံကိုနှုတ်ပိတ်မသွားပါစေနှင့်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်၏နှလုံးနှင့်သင်၏ပင်ကိုယ်သိစိတ်ကိုလိုက်လျှောက်ရန်သတ္တိရှိပါ။ - စတိဗ်ဂျော့ဘ်
သင်ကဖြစ်ပျက်စေရန်ရှိသည်။ - Denis Diderot
သင်၏မျက်နှာကိုနေဆီသို့ ဦး တည်ထားပြီးမင်းအရိပ်ကိုသင်မမြင်နိုင်ပါ။ - ဟယ်လင် Keller ။
ကြိုးစားပါ၊ ကျရှုံးပါ၊ သို့သော်မကြိုးစားပါနှင့်။ - စတီဖင် Kaggwa ။
ငါတို့တွေရဲရဲရင့်ရင့်လိုက်ရင်ငါတို့အိပ်မက်တွေအားလုံးအကောင်အထည်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ - ဝေါ့ဒစ္စနေး။
ဒါဟာလဲကျဖို့ခဲယဉ်းပေမဲ့တောင်တက်ဖို့မကြိုးစားတာကပိုဆိုးတယ်။ - Theodore Roosevelt ရုစဗဲ့
ကောင်းသောနေ့နှင့်မကောင်းသောနေ့တို့အကြားတစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာသင်၏သဘောထားဖြစ်သည်။ - ဒဲနစ်အက်စ်ဘရောင်း။
ပျော်ရွှင်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုသည်အချိန်တိုသည်ဟုထင်ရစေသည်။ - ဝီလျံရှိတ်စပီးယား။
ဘဝသည်နားလည်သဘောပေါက်ရန်နေထိုင်ရမည့်ဒဏ်ရာများဆက်တိုက်ဖြစ်သည်။ - ဟယ်လင် Keller ။
သင်ရွေးချယ်ခံရမည့်သူမှာသင်ဆုံးဖြတ်မည့်သူဖြစ်သည်။ - Ralph Waldo အီမာဆန်။
သင်၌မတတ်နိုင်သောယုံကြည်ချက်ကိုသင်စွန့်လွှတ်လိုပါကသင်လိုချင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိနိုင်သည်။ - ဒေါက်တာ Robert Anthony ။
သင်သည်သင်၏အခြေအနေထက်သာလွန်ကြောင်း၊ သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အရာအားလုံးထက်ပိုပြီးအမြဲတမ်းသတိရပါ။ - အန်တိုနီရော်ဘင်။
ဘယ်သူမှရှုံးနိမ့်ခြင်းမှလုံခြုံသည်။ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ဘာတိုက်ခိုက်နေလဲဆိုတာတောင်မသိဘဲရှုံးနိမ့်တာထက်ငါတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေအတွက်တိုက်ပွဲမှာပွဲတချို့ဆုံးရှုံးတာကပိုကောင်းတယ်။ - Paulo Coelho
သင်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာစေရန်မလိုအပ်ဟုသင့်ကိုယ်သင်ဘာမျှမပြောပါနှင့်။ - Brian Tracy
ယခု မှစ၍ သင်သည်ဖြစ်လတံ့သောအရာအရာကိုပြ။ ၊ - ဝီလျံဂျိမ်းစ်။
အရာရာတိုင်းဟာသင့်ကိုဆန့်ကျင်နေတယ်လို့သင်ခံစားရတဲ့အခါလေယဉ်ကမျက်နှာသာပေးဖို့မဟုတ်ဘဲလေကိုလေကိုဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ - Henry Ford
သင်ကိုယ်တိုင်၊ စကြ ၀ inာရှိအခြားသူများနည်းတူသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်မှုကိုရထိုက်သည်။ - ဗုဒ္ဓ
မိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးသောအရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာများထက်မပိုပါ။ - Ellen Goodman
ကျွန်ုပ်တို့အမြဲလိုချင်သည့်အရာသို့လမ်းလျှောက်သောအခါဝမ်းနည်းခြင်းသည်အစဉ်အမြဲတည်ရှိနေမည်မဟုတ်ပါ။ - Coelho
သငျသညျကမ်းခြေကိုမြင်လျှင်ရပ်တန့်ဖို့သတ္တိရှိသည်သည်အထိသင်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကူးနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ - ခရစ်စတိုဖာကိုလံဘတ်စ်
သင်သည်သင်၏မျက်နှာပေါ်မှာလဲလျှင်ပင်, သင်ရှေ့ဆက်ဆက်လက်။ - ဗစ်တာကင်မ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ပေးနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂရုစိုက်မှုအနည်းငယ်ဖြစ်သည်။ - အန်သိုနီဂျေ: D 'အန်ဂျလို။
သင်ရှိနေသည့်နေရာကိုစတင်ပါ၊ သင်၌ရှိသည့်အရာကိုသုံးပါ။ တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပါ - အာသာအက်ရှ်။
လေပြင်းတိုင်းကျရောက်ပြီးနောက်နေကပြုံးသည်။ ပြproblemနာတိုင်းအတွက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရှိပြီးဝိညာဉ်၏မခြားမလပ်တာဝန်သည်စိတ်ရွှင်လန်းစရာဖြစ်ရန်ဖြစ်သည်။ - ဝီလျံ R. Alger ။
မင်းရဲ့အပြုံးကိုသုံးပြီးဒီကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။ - အမည်မသိ။
နှလုံးသားကိုပျော်ရွှင်မှုနှင့်ပြည့်စေဖို့ချစ်ခင်တွယ်တာသောစကားလုံးအနည်းငယ်ဖြင့်လုံလောက်နိုင်သည်။ - အမည်မသိ။
ကျေနပ်မှုမပေးရင်ဘဝဟာတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူး။ ထိုအရာများထဲတွင်အဖိုးတန်ဆုံးသည်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စိတ်ကိုထွန်းလင်းစေပြီးစိတ်ပျော့ပြောင်းစေပြီးစိတ်ဓာတ်များရွှင်လန်းစေပြီးကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ - သောမတ်စ်ဂျက်ဖာဆန်
လူသားတွင်စွမ်းရည်သုံးမျိုးရှိသည်။ ပြုမူသောသတ္တိသို့မဟုတ်စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်နာခံသောအာရုံ။ - ပလေတို
အပြုသဘောဆောင်သည့်သဘောထားကသင်၏အခြေအနေအပေါ်၌သင့်အားအာဏာရှိခြင်းထက်သင်၏အခြေအနေအပေါ်သြဇာသက်ရောက်စေသည်။ —Joyce Meyer
သည်းခံခြင်းကိုသာခံကြပါစို့။ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်မြင့်မြတ်သောအချိန်ရောက်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဂျေရုဆလင်သစ်သည်ကမ္ဘာ၏မြို့တော်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအချိန်အထိကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းပါ ၀ င်သောအချိန်ကာလ၏ဘေးအန္တရာယ်၌ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းမှုနှင့်ရဲရင့်ခြင်းရှိပါစေ၊ ဘုရားသခင့် ospel ၀ ံဂေလိတရားကိုနှုတ်ဖြင့်အပြုအမူအားဖြင့်ကြွေးကြော်။ သေသည်အထိစစ်မှန်ပြီးအဆုံးမဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသစ္စာရှိပါ။ - Novalis ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်ရန်နှင့်လေးစားရန်သင်ယူပါ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားမယ်ဆိုရင်သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာတစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကိုအရှက်ရစေခြင်းသို့မဟုတ်အရှက်ခွဲခြင်းမပြုရ။ - အမည်မသိ။
၀ ိညာဉ်စိတ်ဆိုးသောအခါကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအရာများသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောအခါထက် ပို၍ ရိုးသားသည်။ - Marco Tulio Cicero
ငွေသည်ပျော်ရွှင်မှုကိုမ ၀ ယ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်သင်၏စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်လုံလောက်သောကြီးမားသောရွက်လှေကိုဝယ်နိုင်သည်။ —David Lee Roth
အခက်အခဲကများလေ၊ - စီစီရို
စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်တွေကိုမင်းယုံကြည်စိတ်ချစွာသွားပါ။ မင်းတွေးမိသလိုဘဝကိုနေထိုင်ပါ။ —Henry David Thoreau
မဖြစ်နိုင်ရင်တောင်အဲဒါကိုသင်အမြဲအိပ်မက်မက်နိုင်တယ်။ - အမည်မသိ။
သင်၏ဘဝတွင်ပေါ်လာသောနံရံများကိုသင့်ပန်းတိုင်များသို့ကျောက်တုံးများဖြင့်လှည့်ပါ။ - အမည်မသိ။
သင်၏မျက်ရည်များကိုသာမြင်လိုသူများအတွက်သင်၏ပြုံးသည့်လက်နက်ကိုသုံးပါ။ - အမည်မသိ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာအကောင်းဆုံးရရန်သင်အဆိုးဆုံးကိုကျော်ဖြတ်ရပေမည်။ - အမည်မသိ။
စိတ်ကိုလေးစားခြင်း၊ လေးစားမှုနှင့်ပြည့်စေသောအရာနှစ်ခုသည်အမြဲတမ်းအသစ်၊ ကြီးထွားလာသည်၊ ပိုမိုမကြာခဏဖြစ်ပျက်လာသည်နှင့်အမျှရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည်သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ - Immanuel Kant ။
၁၀,၀၀၀ ကီလိုမီတာခရီးတစ်လှမ်းတည်းဖြင့်စတင်သည်။ "လာအိုတီ။ "
ဘဝ၌ပျော်ရွှင်ရန်လှည့်ကွက် - သင့်ကိုမည်သူလျစ်လျူရှုသည်၊ မည်သူ့ကိုမျှမသေဆုံးခင်မည်သူကိုလျစ်လျူရှုပါ၊ သင့်အတွက်မည်သူအသေခံနိုင်ကြောင်းပထမ ဦး စွာကြည့်ပါ ... - Anonymous ။
တေးဂီတသည်ပြိုကွဲပျက်စီးသည့်ဝိညာဉ်များစပ် ဆို၍ ၀ ိညာဉ်တော်မှမွေးဖွားလာသည့်အကျင့်များကိုသက်သာစေသည်။ - Miguel de Cervantes Saavedra
မည်သည့်စိတ်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်သည့်အခါ၎င်းပြည်နယ်၏အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူချက်များကိုသာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ - Georg Duhamel
စကားပြောသည့်အခါယဉ်ကျေးသော၊ - Marco Tulio Cicero
စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုသည်အနာဂတ်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲပစ္စုပ္ပန်ကိုခံစားနေရသည်။ —Marco Aurelio ။
မုန်တိုင်းသည် ပို၍ ပြင်းထန်လေလေ၊ - Paulo Coelho
ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေတွန့်လာသောအခါမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်မက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်ပျက်စီးသွားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်ကြီးလာသည်။ - အမည်မသိ။
မင်းလုပ်ချင်တာတွေအားလုံးကိုလုပ်ပါ။ - ဒေသနာ
အပြုံးဆိုသည်မှာသင်၏ပုံပန်းသဏ္improveာန်တိုးတက်ရန်စျေးသိပ်မကြီးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ "ချားလ်စ် Gordy ။ "
ပညာရှိတစ် ဦး ကခွန်အားရှိရန်အလေးချိန်များစွာမတင်ရန်ပြောခဲ့သည်။ မင်းလဲကျတိုင်းမင်းကိုမင်းရုတ်သိမ်းရုံနဲ့လုံလောက်ပြီ - အမည်မသိ။
ဘယ်မှာလဲစ သင့်မှာရှိတာကိုသုံးပါ။ တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပါ - အာသာအက်ရှ်။
မင်းအထီးကျန်နေလား? သင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပါ။ သင့်ရဲ့အပြုံးကိုစောင့်ဆိုင်းနေသောလူများစွာသည်သင်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်ရန်တွေ့လိမ့်မည်။ - အမည်မသိ။
ဘဝကိုပြန်လှည့်ကြည့်သင့်သည့်တစ်ခုတည်းသောအချိန်မှာကျွန်ုပ်တို့မည်မျှဝေးဝေးရောက်ရှိနေသည်ကိုကြည့်ရန်ဖြစ်သည်။ - အမည်မသိ။
ရှုံးနိမ့်မှုတိုင်းသည်လူတစ် ဦး အားသူသင်ယူရန်လိုအပ်သည့်အရာကိုသင်ပေးသည်။ - ချားလ်စ်ဒစ်ကင်း
ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လိပ်ပြာနှင့်တူ၏။ သင် ပို၍ လိုက်လံဖမ်းဆီးလေလေ၎င်းကိုရှောင်နိုင်လေလေ၊ သင်ပျံသန်းခွင့်ပြုလျှင်သင်အနည်းဆုံးမျှော်လင့်သည့်အချိန်တွင်ပြန်လာလိမ့်မည်။ - အမည်မသိ။
ငါတို့ခရီးအတွက်နာကျင်မှုကိုလက်ခံပြီးဓာတ်ဆီကဲ့သို့လောင်ရမည်။ - Kenji Miyazawa ။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွင်! အားလုံးဖြစ်ပျက် သင်၏အလုပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးနေ့စဉ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါနှင့်။ - Don Bosco ။
ဘာသာတရားသည်မကောင်းမှုကိုအကြမ်းဖက်ရန်ထက်ကောင်းကျိုးကိုပိုမိုပေးသင့်သည်။ - Arturo Graf
စိတ်၏မျှတမှုကိုအဘယ်အရာကမျှမနှိမ်နင်းသင့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါက်ကွဲမှုများကိုတိုင်းတာ။ ချိန်ခွင်ပြုရမည်။ - Francisco Ayala
မင်းတစ်မိနစ်တိုင်းမှာ pissed ဖြစ်နေတာ၊ မင်းဟာပျော်ရွှင်မှုကိုစက္ကန့်ခြောက်ဆယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ - Ralph Waldo အီမာဆန်။
သင်၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းလိုက်ပါ။ လမ်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုကြည့်စရာမလိုသော်လည်းသင်၏ပထမခြေလှမ်းကိုလှမ်းပါ။ သင်လမ်းလျှောက်စဉ်ကြွင်းသောအရာပေါ်လာလိမ့်မည်။ - မာတင်လူသာကင်း။
ဘဝကိုအခြားရှုထောင့်မှကြည့်ရှုနိုင်ရန်ဤအားပေးစကားများကအထောက်အကူပြုမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကျစေဖို့ဆက်ပြီးတိုက်လှန်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အမှားများပြုသည်ကိုသတိရပါ၊ သို့သော်ဆက်သွားသူများသည်ခြားနားချက်ကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှိသောစာပိုဒ်တိုများပါ ၀ င်သည့်လှုံ့ဆော်မှု၊ တိုးတက်မှုနှင့်တိုတောင်းသောရောင်ပြန်ဟပ်မှုများစသည့်အခြားဆောင်းပါးများကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများနှင့်ပုံများ » 125+ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လှုံ့ဆော်ရန်အားပေးမှုအဆင့်များ
ဟိုဆေး alejandro orozco ဟုသူကပြောသည်
Jose alejandro orozco သို့ပြန်သွားပါ